Fihanaky ny valanaretina :: Maherin’ny fitonjato ny marary vaovao voan’ny Covid-19 • AoRaha
Efatra amby roapolo sy fitonjato ny marary vaovao voan’ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin’ny roa andro, araka ny tarehimarika nampitain’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana amin’ny ady amin’io valanaretina io (CCO), ny sabotsy sy alahady. Raha nihena ireo marary mafy, omaly, dia olona iray kosa no lavo tsy nahatohitra ny valanaretina.
Efatra amby dimampolo sy efajato sy roa arivo, ankehitriny, ireo marary manohy ny fitsaboana, ka valo amby dimampolo amin’izy ireo no isehoan’ ny soritr’aretina mahery vaika. Avy amin’ny fitiliana iraika amby fitopolo sy eninjato sy arivo natao no nahitana an’ireo tranga vaovao ireo, tamin’iny faran’ny herinandro iny. Telo amby dimampolo sy sivy arivo sy roa alina kosa ny fitiliana vita, nanomboka tamin’ny nahatongavan’ny valanaretina teto amintsika.
“Raiamandreny am-panahy, mpanompon’Andriamanitra ilay nindaosin’ny fahafatesana”, araka ny sombim-baovao nomen’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle tamin’ny feo malefaka, raha nilaza ny fahafatesan’ilay olona iray noho ny Covid-19 izy. Tsy nisy toro hafa kosa nahafahana nahafantatra na iza na iza io lavon’ny valanaretina io. Tafakatra dimy amby telopolo ireo namoy ny ainy avy amin’ny valanaretina teto Madagasikara.
Tranga 600 eto Analamanga
Misy hatrany kosa ireo nahazo fahombiazana tamin’ny fitsaboana satria dimy amby sivifolo amby zato indray ireo naharesy ny valanaretina Covid19, tao anatin’ny roa andro. Mahatratra valo amby fitopolo sy telonjato sy roa arivo izy ireo, hatramin’ny omaly.
Laboratoara roa no nisahana fitiliana efatra amby valopolo sy valonjato, raha tamin’ny fitiliana geneXpert ny sivifolo tamin’ny faritra manerana ny Nosy. Ireo no nahazoana ny tarehimarika momba an’ireo marary dimy amby telopolo sy efajato nampahafantarina, afak’omaly.
Nambaran’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, tamin’ny sabotsy, fa: “avy eto Analamanga ny marary vaovao 401, any Alaotra Mangoro ny roapolo. Nahitana ihany koa ny any Toliara, any amin’ny faritra Matsiatra Ambony sy Anosy ary Analanjirofo”.
Ankoatra ny laboratoara telo nanao fitiliana dia nahazoana valiny sady nahitana ny tranga vaovao ny fitiliana geneXpert 32. Tamin’ny alalan’ireo no nivoahan’ireo tranga vaovao sivy amby valopolo sy roanjato, omaly. Eto amin’ny faritra Analamanga hatrany ny ankamaroany amin’izy ireo, izay mahatratra sivy amby efapolo sy roanjato.